Nakuba abaningi becabanga ukuthi ukumodeliswa - umsebenzi esinzima, futhi akubona bonke amandla, empeleni akusiyo. Wonke umuntu angenza izinto ezimangalisayo ulandela imihlahlandlela elula bese ulandela imiyalelo step by step. Isihloko unika izibonelo ezimbalwa okulula indlela sculpt izithelo nemifino kusuka plasticine.
Indlela ehlukahlukene ezokungcebeleka ingane, kwenze hhayi kuphela ezithakazelisayo, kodwa ewusizo? Ungafunda, engeza KaMose futhi puzzle, ukuqoqa umklami ukudweba noma sculpt amadoda, izilwane, imifino kanye nezithelo kusukela plasticine.
Ngokuvamile, ukumodeliswa - umsebenzi ewusizo kakhulu kuzo zonke izingane. It enyamalele ingqondo, eba umcabango umcabango lembula lokusungula. Lapho ingane yenza imifanekiso, ezifana imifino noma izithelo, nga bumba, isebenze emihle motor amakhono yezandla, okuyinto unomthwalo inkulumo, ukucabanga, ukunakwa. Futhi, inqubo ngokwalo kuzothatha eziningi ukuzijabulisa kanye nabantu abadala. Umama nengane nijabula ngasikhathi umphakathi nomunye, inkosi ezihlekisayo tiger noma Smeshariki.
Omunye ongakhetha elula kuyinto okudala ukumodeliswa izithelo nemifino kusuka plasticine. Lo msebenzi Kulula ukuba ukhuthazele futhi izimfundamakhwela ziyaye.
Dazzle ophuzi plasticine ubhanana - kulula! Okokuqala okudingeka sibhukule ayi ezimbili kwakhahlela side, kancane lizilolongele. Khona-ke ngento ecijile (ezifana nothi lokuvungula imbala) ukuchitha kubo engajulile anemifantu ambalwa longitudinal. Manje wenze isoseji izacile futhi mfushane nge sitho esincane phakathi. Ngalokhu isithasiselo unamathele ubhanana ezimbili - Thola kweqembu.
Uma wenza konke ngendlela efanele, plasticine yakho ubhanana ziyefana esithombeni ngenhla.
Ukuze wenze isanqante, uzodinga izingcezu ezimbili plasticine - orange kanye oluhlaza. Okokuqala lepim preform:
impande - Kata orange amasosishi iyincane kolunye. Ichopho ebanzi kuyadingeka nendlale umunwe kancane. Okuthile abukhali (uthi lokuvungula isibonelo) ukuchitha ku impande izitshalo iDemo transverse stripes;
ekunqandeni - Kata ibhola green, aba iminwe yakhe nhlangothi zombili, ngemva komunye umkhawulo zauzhaem kancane. Lokuvungula enze furrow ezijulile ububanzi e isiqondiso esivela abanzi emaphethelweni emincane (njengoba kuboniswe esithombeni).
Manje uhlala le elula kunazo - ukuqoqa izaqathe kusukela izikhala. Ukuze wenze lokhu, kudingeka anamathele ukudla ohlangothini ewumngcingo emaphethelweni ebanzi isivuno impande. imifino Plasticine ngomumo! Uthola igunya elifanayo nalelo esithombeni?
Akukho lutho kulula kunokuba utamatisi abayizimpumputhe! ngisho iminyaka emithathu izingane ngeke babhekane nalesi msebenzi.
Nalapha, kudingeka ukuthi uqale nalutho. Master lokuqala izithelo, okuyinto skiers amabhola of plasticine abomvu. Manje, ngezigaba ezimbili ukwenza Isiqu oluhlaza namahlamvu, okokuqala kusukela indaba umbala okuhambisanayo udinga Roll ibhola, bese iminwe emibili ukuyikhipha of akhe amahlanu-eshiya ayi yakhe emfushane.
Isinyathelo sokugcina - pick utamatisi wethu, ukuthi kulula ku ibhola elibomvu ukubophela Isiqu oluhlaza namahlamvu. Uma kwenziwe ngendlela efanele, uthola yemifino, njengoba esithombeni esingezansi.
Amagilebhisi - kuyinto berry, hhayi zemifino noma izithelo. Kodwa ezihlukahlukene ufunde indlela sculpt samagrebhisi. Lapho ukuthi wenze kube nzima akukho okungaphezu kokwenza ukuhambela notamatisi. Ukuze uqale nge kokuqendwa ingxenye: amajikijolo kanye namahlamvu.
Ukuze wenze lokhu, kusukela plasticine Lilac knurled 12-15 amabhola amancane, ngamunye okuyinto kancane iminwe splyusnem, azinike ukuma okungajwayelekile. Okulandelayo zifa ivolumu ezintathu okusaqanda (ifomu banayo ukukhumbuza Iqanda) kanye omuhle ukuqasha kubo kusuka zombili, ukuze babe flat.
Isinyathelo esilandelayo - ukubophela wonke amajikijolo (ubuhlalu onsomi) ndawonye ngendlela Isigaxa, futhi phezulu (ingxenye ebanzi) unamathele ezintathu leaf oluhlaza. Samagrebhisi ngomumo!
Manje, ubonile ukuthi ngethonya izithelo nemifino ngebumba - kuyinto umsebenzi elula futhi kumnandi? Lokho umphumela esizifunde ukwenza - ubhanana, izaqathe, utamatisi no samagrebhisi.
Esebenzisa ukucabangela, ungenza noma yikuphi imifino nezithelo ngebumba: apula, ithini lamapheya, plums, ikhabe, iklabishi, uphizi, u-anyanisi, radishes, isitshalo seqanda, nabanye.
Zonke kufanele kube sobuhle bayo. Ngakho-ke ekhiqizwa izithelo nemifino kusuka plasticine awukwazi nje ukuphonsa ebhokisini, kufanele kamnandi ukubeka, isibonelo, kubhasikidi noma ipuleti. Ingane ngeke sikwenze ngenjabulo.
Lapha ngoqwembe zimi Okuyınqo, isitshalo seqanda.
Enye dish egcwele ezihlukahlukene plasticine imifino. On ke singabona iqhwa uphizi, radishes, izaqathe, iklabishi ngisho tykvochki encane maphakathi kwengoma.
Lapha izingcweti yonke imikhiqizo yayo babeka phansi kwesitsha. Futhi isixazululo ezithakazelisayo kakhulu. Zama ngokwakho, futhi uzobona ukuthi umqolo plasticine izithelo (nemifino, vele) - lithandana kuyajabulisa.
Umdwebo lase. Lase imidwebo amasu. esikoleni lase-imidwebo
Bakhrushin Museum Paveletskaya: Imibukiso, izibuyekezo, izithombe
Alexei Savrasov - umsunguli we landscape engeqisi Russia
Amaswidi Uzbek zokupheka